トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Tombontsoa sy ny fatiantoka mikendry ny takelaka modely ny pachinko trano izy
Signboard modely, Te-hilalao mpanjifa indrindra ao amin'ny pachinko efi-trano, 's ny vokatra nasongadina. Signboard modely, fa samy hafa ny tsirairay tsena, matetika isika dia maro modely iray malaza hatry ny ela andian-dahatsoratra. Raha niresaka momba ny antony, ny andian-dahatsoratra malaza Xintai mivoaka avy ao amin'ny manaraka ny manaraka. Ny modely toy izany koa ny andian-dahatsoratra, raha Tsukaere be toy ny ivon'ny modely, fivarotana io ho an'ny modely io dia mety hamorona matanjaka sy sary.
Noho izany, tiako ny hojerentsika ny tombony sy ny fatiantoka izay namely ny famantarana modely foana na inona na inona pachinko parlors.
tahaka ny soa, dia izay miovaova mihitsy. Indrindra fa fanitsiana sy fantsika Horukon toerana, mihevitra aho fa ny hevitra dia lehibe kokoa izay somary miovaova. Signboard modely, satria mariky ny famoronana sary fivarotana an-dalambe ny anarany, dia modely fa tsy afaka mora foana na ho amin'ny latabatra manontolo ny milina sitrana. Indrindra indrindra, raha ny olona tao dia maro hanao sonia modely, fironana toy izany dia ho matanjaka.
fantsika fanitsiana azo atao izay miovaova, satria ny hafainganam-pandehan'ny rotational, ohatra arivo Yen miovaova foana, dia mora marika amin'ny ohatry ny fampiasam-bola, dia ny ady amin'ny data-mirona dia afaka ny ho. Eo ho eo ny manodidina, ny avo koa hitoetra ao takelaka modely isan'andro, ho tonga haingana kokoa ny isan-convergence, dia vao mainka namely voajanahary eo ho eo. Arakaraka angona, dia toy izany koa azo ampiasaina ho toy ny fitaovana tapa-kevitra ny hamaky ny onjam-Horukon sy ROM hisy ady ao an-mora.
Ankoatra izany, satria matetika ny takelaka modely pachinko efi-trano izay nametraka bebe kokoa ny isa, dia ny fantsika fanitsiana ny latabatra manontolo isan'andro, dia ho ara-potoana sarotra. Raha noho Horukon napetraka ny Hanemono mba hanitsy ny baolina avy amin'ny fantsika fanitsiana, tranga maro tahaka ny fivarotana lehibe dia lehibe, dia toy ny iray amin'ireo paikady izany nahemotra ka tanjona.
ny tombon-dahiny amin'ny hoe, raha niresaka ny zavatra izany, dia ny sonia tena modely, mitombo tsy tapaka, dia ny fiarovana ny sehatra dia sarotra. Ny olona tao, ianao handeha hitsidika mikendry ny takelaka modely ny toeram-pivarotana. Ny olona rehetra, fa indrindra ny fahitana izay namely ny olona tao voangony ireo hanao sonia modely Mino aho fa misy.
fa, pachinko fivarotana ny olona tao dia amin'ny be, ny fandaharana mialoha ny fanokafana ny tsara, ihany no sonia ny modely avy amin'ny maraina ny lasa toerana avo hitoetra ao. Wave latabatra tsara ny isan-takelaka modely dia tsy mipetraka hiara-hiditra indray maraina. Niezaka izahay ny hampitombo ny tombontsoa sy ny fatiantoka ny takelaka modely, ny tsara kokoa ny soa, eo ho eo, matetika, no sonia ny modely. Raha toa ka very ny modely voafidy, dia mety ho manan-tsaina tokoa ny miezaka ny namely ny takelaka modely.